डा केसीलाई कांग्रेसको सभापति बनाए हुन्छ, केसीलाई च्याँखे थाप्दैमा सरकारको रौं पनि हल्लिन्न : मुख्यमन्त्री गुरुङ, | Hulaki Online
July 24, 2018 .
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डा. गोविन्द केसीलाई बोकेर नेपाली कांग्रेसले च्याँखे थापेको आरोप लगाएका छन् । गुरुङले डा. केसीलाई च्याँखे थाप्दैमा सरकारको रौं पनि नहल्लिने टिप्पणी गरे । उनले एक व्यक्तिलाई उचालेर आन्दोलन गर्दैमा माग पूरा गर्न नसकिने प्रष्ट पारे ।नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गुरुङले अब नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार २५ वर्षसम्म टिक्ने दाबी गरे । उनले नेपाली कांग्रेस अहिले नेतृत्वविहीन जस्तै भएको टिप्पणीसमेत गरे । ‘कांग्रेसको नेतृत्व अहिले संकटमा छ’ गुरुङले भने, ‘अब डा. गोविन्द केसीलाई चिकित्सक पेसाबाट राजिनामा गर्न लगाएर कांग्रेसको सभापति बनाए हुन्छ’ । कम्युनिस्ट सरकारले जनजीविकाका सवालमा राम्रो गर्दै गइरहेकाले कांग्रेस अत्तालिएको गुरुङको भनाइ छ ।
गुरुङले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई दुई दिनभित्रै राष्ट्रियकरण गर्न सकिने भए पनि यो सरकार व्यक्तिगत पूँजीको संरक्षणमा पनि उत्तिकै संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । शिक्षालाई सेवामुखी नभइ नाफामुखी बनाउने काम कांग्रेसले गरेको आरोप लगाउँदै गुरुङले विधिको शासन, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका विषयमा कांग्रेसले पाठ सिकाउन नपर्ने बताए । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४० औं स्मृतिसभालाई नवलपुरको कावासोतीमा सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले धेरै जसो समय कांग्रेस र केसी कै बिरोधमा खर्चेका थिए ।
फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री गुरुङले नवलपुर गण्डकी प्रदेशको दक्षिण ढोका भएको बताएका छन् । उनले नवलपुर दक्षिण ढोका र कोरला नाका उत्तरी ढोका भएको भन्दै दुवै ढोकालाई बलियो बनाए मात्रै समृद्व गण्डकी प्रदेश बन्ने बताए । नवलपुरलाई सम्मृद्व बनाउन प्रदेश सरकार लागिरहेको बताउँदै गुरुङले यस क्षेत्रलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्न आफू प्रतिबद्व रहेको विश्वास दिलाए । उनले गण्डकी प्रदेशका कुन क्षेत्रमा बिजुली बत्ती पुगेको छैन त्यस ठाउँको खाका लिएर आए दुई वर्षभित्र बिजुली बालेरै छाड्ने बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलक महतले पाँच वर्षसम्म प्रतिक्षा गरेर बस्न नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे । जनताले पाँच वर्षका लागि जनमत दिएर पठाएको सरकार भएकाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर पाँच वर्षसम्म बस्न सुझाव दिए । त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य किशन शर्मा गैरेले दुई कम्युनिस्टहरु एक भएको देखेर कांग्रेस अत्तालिएको भन्दै दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।साउन-८, २०७५